I-Badalona, ​​ukusuka kwixesha elidlulileyo laseRoma ukuya kubakhenkethi | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 04/04/2021 15:30 | Ukuhlaziywa ukuba 06/04/2021 17:04 | Spain izixeko, Yintoni ongayibona
I-Badalona ineempawu ezithile zokuba yenye yezo ndawo zifakwe kulwandiso lwesixeko esikhulu, kwimeko yayo Barcelona. Nangona kunjalo, iyaqhubeka nokuba ngumasipala ozimeleyo kwaye sesine isixeko esinabemi abaninzi kuwo wonke ECatalonia.
Ukongeza, imvelaphi yayo ibuyela kwakudala, njengoko kubonisiwe yi I-Iberia kunye neLayetan zihlala zifunyenwe kwindalo yazo. Nangona kunjalo, yadalwa njengesixeko amaRoma malunga ne-100 BC phantsi kwegama lika Baetulo. Ngapha koko, isixeko sikwenye yezona ndawo zibalulekileyo zamaxesha esiLatin eSpain. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngeBadalona, ​​siyakukhuthaza ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Yintoni ongayibona eBadalona
1.1 IPont del Petroli, uphawu lwesixeko
1.2 Monastery yaseSant Jeroni de la Murtra
1.3 Umzi mveliso waseLa Badalona
1.4 Iipaki, imiphunga eluhlaza eyiyo yaseBadalona
1.6 Ummelwane waseDalt de la Vila
1.7 Imyuziyam yaseBadalona
1.8 Indlu yeeDolphins kunye negadi yaseQuinto Licinius
Yintoni ongayibona eBadalona
Ngokuchanekileyo intsalela yamaRoma yenye yezona zinto zinomtsalane kwisixeko saseCatalan. Kwaye, ecaleni kwabo, iilwandle ezintle, iipaki ezintle kunye neseti elungileyo yezikhumbuzo. Siza kutyelela zonke ezi ndawo zinomdla.
IPont del Petroli, uphawu lwesixeko
IPont del Petroli kunye nomzi mveliso waseAnís del Mono
Le bhulorho inyawo, ehamba iimitha ezingama-250 elwandle, ngoku yenye ye Imifuziselo ukusuka kwisixeko saseCatalan. Yakhiwa ngo-1965 ukuba iitanki ezinkulu zeoyile zishiye imithwalo yazo kwiitanki ezakhelwe le njongo.
Njengomdla, siza kukuxelela ukuba ibhulorho yayiza kudilizwa ngo-2001, kodwa yagcinwa kukudilizwa liqela labantu baseBadalona ababekhokelwa ngumpheki. UJosep Valls. Okwangoku, yindawo enkulu ukuba uziqhelanise nayo ukudayiva emanzini kwaye, ngaphezu kwayo yonke, ukuze uhambe ngokuzonwabisa ukutshona kwelanga okumangalisayo.
Monastery yaseSant Jeroni de la Murtra
Uya kuyifumana le monastery kwelinye icala lendlela. Inye ye ubucwebe be-gothic kwiphondo laseBarcelona. Imihla yayo yokuqala yokwakha isusela kwinkulungwane ye-XNUMX, nangona kamva yandiswa ngokongeza i-cloister, icawe, amakhitshi kunye nesela. Ikwaqaqambisa a inqaba yokuzikhusela eyayisetyenziselwa ukuthintela uhlaselo lweepirate elunxwemeni.
Umzi mveliso waseLa Badalona
Ngaphakathi kumzi mveliso we-Anís del Mono
Isixeko saseCatalan sikwanikezela ngelifa lemveliso elibanzi xa laliphuhliswa ngale ndlela ngekhulu le-XNUMX. Phakathi kwezi zakhiwo kubonakala umzi mveliso wakudala waseAnís del Mono, namhlanje eyimyuziyam malunga nokucaciswa kwendabuko kwesi siselo.
Kukwafanelekile ukutyelela i- umzi-mveliso weNkampani eNcedisayo yoRhwebo noShishino, isakhiwo sanamhlanje esakhiwe ngo-1899 ngu UJaime Botey i Garriga, owayekwangusodolophu wesixeko. Esi sakhiwo sasiza kumiselwa u- Imyuziyam ehlekisayo. Nangona kunjalo, iprojekthi iye yanqunyanyiswa okwethutyana.
Iipaki, imiphunga eluhlaza eyiyo yaseBadalona
Ngaba uSolei i Ca l'Arnús Park
Enye yezinto ezinomtsalane kwisixeko saseCatalan linani elikhulu leepaki. Itotali Iihektare ezingama-96 wedolophu ziindawo eziluhlaza kunye nemiphunga yokwenyani yabemi bayo. Phakathi kwabo Ngaba iSolei kunye neCa l'Arnús park. Esi sitiya sineenyani kunye nenqaba encinci, iinqaba ezinje ngezo Reloj kunye Amanzi nditsho negrotto.
Kunye nale, ezinye iipaki esixekweni leyo yeTuró d'en Caritg, ebekwe endulini; lo uvela eMontigalá, ilungele ukuhamba; ekaGran Sol, Kunye nezinye iintlobo Asia; enye evela eNueva Lloreda, kunye nezixhobo zemidlalo, kunye le ivela eCasa Barriga.
Ulwandle lweBarca María
Isixeko sine iikhilomitha ezintlanu zamabhishi ezineemeko ezifanelekileyo zokuba ukonwabele ukuhlamba kunye nezixhobo ezizezona zipheleleyo ukuze utyelelo lwakho lutofotofo. Phakathi kwezi siza kuthetha elunxwemeni YeBarca María, del Cristall, Abalobi, yesikhululo y de la Mora.
Ummelwane waseDalt de la Vila
Ligama elinikwe idolophu yakudala yaseBadalona, ​​kangangeenkulungwane iziko lokwenyani lesixeko. Njengoko unokucinga, kuyo unezikhumbuzo ezininzi zobuhle obukhulu. Phakathi kwabo, iintsalela zemidlalo yeqonga yamaRoma en UCarrer de Les Eres.
Kodwa ngaphezu kwako konke, okuxabisekileyo Icawa yaseSanta Maria, ngefafaade yoKuvuselela i-Renaissance kunye nenqaba enkulu yentsimbi. Kwaye, kufutshane kakhulu nayo UTorre Vella, Ibhotwe eliluhlobo oluhle lwenkulungwane ye-XNUMX. Iplanethi yayo yePlateresque kunye nesisele sayo seGothic sime kule.
Okokugqibela, ungashiyi indawo yakudala yesixeko ungakhange ubone izindlu zaso ezikumgangatho ophezulu kwiNoucentista kunye nesitayile seManjeista. Umzekelo, Ca l'Amigó, Ngaba unakho Clapés kunye Iiplani zeNdlu.
Iziqwenga zeMyuziyam yaseBadalona
Sele sikuxelele malunga nelifa elikhulu lokumbiwa kwezinto zakudala elifunyenwe phantsi komhlaba wedolophu yaseCatalan. Inxalenye elungileyo yale ntsalela ibonakalisiwe kwimyuziyam enomtsalane ehambisa wena kwizitalato ze Baetulo kwinkulungwane yokuqala BC.
Ezinye zeecwecwe eziboniswe kwi-3400 yeemitha zesikwere zezi imithombo eshushu, i decumanus okanye isitalato esikhulu kwaye, ngaphezu kwayo yonke, UVenus waseBadalonaImifanekiso eqingqiweyo eneesentimitha ezingama-28 ukusukela kwixesha lokusekwa kwedolophu.
Indlu yeeDolphins kunye negadi yaseQuinto Licinius
Ngokungena kumyuziyam ufumana ilungelo lokundwendwela la maziko mabini. Inkqubo ye- Indlu yeDolphin ikwangaphantsi komhlaba kwaye ibizwa ngegama lexabiso dolphin mosaic Bahombisa ichibi labo ukuqokelela imvula. Yayiyinto enkulu domus Inqaba yaseRoma ephantse yamakhulu asibhozo eemitha, nangona namhlanje ungabona kuphela malunga namakhulu amathathu.
Ngenxalenye yalo, i Umyezo waseQuinto Licinius inokukuphoxa kancinci. Into oyibonayo namhlanje luhlobo lwechibi ekufanele ukuba, ngexesha lalo, ligcwele zizityalo neentyatyambo. Nangona kunjalo, unokufumana umbono wokuba kwakunjani ngo ulonwabo olubonakalayo ezinikezelwa liziko. Kule ndawo, i Isibhedlele saseTabula, uhlobo lwesivumelwano esiqinisekisileyo Eyesihlanu Licinius njengomkhuseli weBaetulo kwaye ungabona nakwimyuziyam.
Ibaluleke kakhulu eyadlulayo iRoma yaseBalalona kangangokuba, unyaka nonyaka, isixeko siphuhlisa IMagna Celebratio, apho amajoni amaLatin ahamba ngezitrato zawo kunye neendawo zamagcisa exesha elo abekwe kwiimbombo zayo.
Ukuqukumbela, ikunika okuninzi Badalona. Kwilifa layo elibalulekileyo lamaRoma kufuneka wongeze amatye ezikhumbuzo axabisekileyo, iipaki ezinkulu kunye neelwandle ezintle. Ukuba utyelele esi sixeko, awuyi kuzisola. Kwakhona, ukuba ufuna ukuthatha ithuba lohambo lwakho ukwenza eminye imisebenzi, nxibelelana nathi Uluhlu lweepaki zamanzi ezilungileyo eCatalonia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Spain izixeko » Badalona
Tenerife nudist iilwandle